प्रचण्ड Archives - Lokpati.com
Tag - प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई केही दिनमै हटाउने बताएका छन्। गृहजिल्ला चितवनमा आइतबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले केही दिनमै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट...
नयाँ विद्रोहमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने प्रचण्डकाे चेतावनी
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ विद्रोहमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार आयोजित नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको चौथो केन्द्रीय परिषद्लाई सम्बोधन...
सुर्खेत। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिक्रान्तिको दिशातर्फ अघि बढेको आरोप लगाउँदै फेरि विद्रोहको आवश्यकता परेको बताएका छन्।
सुर्खेतमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले...
Uncategorised • राजनीतिक दल
जनताले सोचे जति काम गर्न नसकेकोमा प्रचण्डकाे दुखेसो
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले पटक पटक मौका पाएर पनि जनताका लागि सोचे जति गर्न नसकेको दुखेसो गरेका छन्। पश्चिम भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष दाहालले बुधबार रुकुममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै...
प्रचण्डकाे आत्मआलाेचना : ‘बादल’लाई गृहन्त्री बनाउनु गल्ती भयो
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जाली फटाहाले प्रतिक्रान्ति बढाउने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। ३२ औं जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा रूकुम पश्चिममा आयोजित जन प्रशिक्षण कार्यक्रममा...
नरैनापुरका आगलागी पीडितको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न सरकारसँग प्रचण्डकाे आग्रह
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ खोदवामा शनिवार भीषण आगलागीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले आगलागीबाट घाइते भएकाहरुको शीघ्र...
नेपाली समाज फासीवादी निरंकुशतातिर जाने खतरा रहेको छ : प्रचण्ड
काठमाडाैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली समाज फासीवादी निरंकुशतातिर जाने खतरा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार वामपन्थी नेता स्व. माणिकलाल श्रेष्ठको...
प्रचण्डले भेटे कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा नेता बाबुराम भट्टराई
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रुपमा विकास भइरहेका बेला दाहालले...
प्रचण्ड–नेपालको बिकल्प : ‘अर्ली इलेक्सन’मा सहमति !
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि धेरैको अपेक्षा थियो – अब ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन्, संसद रक्षाको पक्षमा उभिएका दलहरु मिलेर...
सत्य, न्याय र विधिको सधै जित हुन्छ : प्रचण्ड
सिन्धुली। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नरहेको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल सिन्धुलीले बिहीवार सिन्धुलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले...